Xiaomi Mi 10 Series နဲ့ပတ်သက်ပြီး သိထားသမျှ - PX
Xiaomi Mi 10 Series နဲ့ပတ်သက်ပြီး သိထားသမျှ
Snapdragon 865 မိတ်ဆက်ပွဲမှာ ဒီ SoC ကို အစောဆုံးအသုံးပြုမယ့် Smartphone တွေထဲ Mi 10 လည်း ပါခဲ့တယ်။ ဒါကမပြောလည်း သိတဲ့ကိစ္စ။ ဒါပေမယ့် ပြောမှသိမယ့် Mi 10 Series နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတစ်ချို့ကတော့ Weibo ပေါ်ကနေ ဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ ဆိုတော့ ဟုတ်၊ မဟုတ်ဆိုတာ ယတိပြတ်မပြောနိုင်သည့်တိုင် ဒီအချက်လေးတွေသိထားတော့ နှစ်မကူးခင် အကြိုရင်ခုန်ထားလို့ရတာပေါ့။
ပထမသတင်းကတော့ Mi 10 ဟာ Phone Model တစ်ခုဆိုတာထက် Flagship Series တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုမှာဖြစ်ပြီး သူ့အောက်မှာ Model အခွဲ ၃မျိုးပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ Model တစ်မျိုးစီရဲ့ သတင်းတွေကို စပြောပါ့မယ်။
Mi 10 Series ရဲ့ အလယ်အလတ်မှာရပ်တည်မယ့် ဒီ Model အနေနဲ့ SDM 865 အပြင်
– 1080p + 90Hz Super AMOLED Display, UFS 3.0 Storage + LPDDR 4x RAM.
– Linear Motor Vibration, Stereo Speakers.
– Sony IMX 686 (64 Megapixels Sensor).
– 4500 mAh Battery + 30W Fast Charging & Wireless Charging + 10W Reverse Charging စတာတွေ ပါဝင်ပြီး ဈေးအားဖြင့် 3299 Yuan (မြန်မာငွေ ၇ သိန်းဝန်းကျင်) ကနေ စနိုင်ပါတယ်။
Mi9တုန်းက Pro Model ထွက်ခဲ့သလို Mi 10 ရဲ့ Pro Model မှာတော့
– Quad HD + 120Hz Super AMOLED, LPDDR5RAM.
– Samsung 108 Megapixels Sensor
– 5,000 mAh Battery + 66W Fast Charging + 40 or 30W Wireless Charging + 15W or10W Reverse Charging တို့လို Mi 10 ထက်သာတဲ့ Feature တွေကို 4499 Yuan (မြန်မာငွေ ၉သိန်းခွဲ ဝန်းကျင်)ကနေ စပြီး ရောင်းချလာနိုင်ပါတယ်။
Mi 9SE ဟာ Xiaomi ရဲ့ နောက်ဆုံး Compact Model ဖြစ်လာမယ်လို့ Lin Bin က ပြောခဲ့ပေမယ့် သေးသေးကျစ်ကျစ်နဲ့ဖုန်းတွေအထုတ်နဲလာတဲ့ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ဈေးကွက်ရဲ့လစ်ဟာမှုကို အခွင့်ကောင်းယူဖို့ Xiaomi အနေနဲ့ ပြန်ကြိုးစားလာနိုင်ပါတယ်။ Model ၃မျိုးထဲမှာ မသေချာဆုံးသတင်းဆိုပေမယ့် ထွက်လာခဲ့ရင် SoC အနေနဲ့ SDM 765 ကို သုံးလာနိုင်ပြီး Sony IMX 686 နဲ့ ပွဲထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ (Mi 10 ထက်တော့ သေချာပေါက် ဝိတ်လျှော့ခံရမှာပါ။)
ဒီသတင်းကလည်း Mi Fan တွေအတွက် အားရစရာဖြစ်လောက်မှာပါ။ Mi 10 Series တွေမှာ Mi Mix Alpha တုန်းကသုံးခဲ့တဲ့ ကျောဘက် Design ကို မြင်ရနိုင်ပြီး တကယ်သာဖြစ်လာခဲ့ရင် လေးထောင့်တုံး Camera တွေနဲ့ Android ဖုန်းတွေကြားမှာ အတော်လေး Unique ဖြစ်တဲ့ Design ဖစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ရှေ့ဘက်မှာတော့ Punch Hole Display ကို သုံးလာနိုင်ပြီး Pro or အမြင့် Model ၂မျိုးလုံးမှာ Curved Display နဲ့ ပွဲထွက်လာနိုင်ပါတယ်။
Mi Flagship Series ရဲ့ထုံးစံအရ Mi 10 Series ဟာ February or March လောက်မှ မိတ်ဆက်လာနိုင်တာမို့ ခုထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းတွေဟာ လွှတ်ယုံဖို့ စောလွန်းနေတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီအချက်တွေသာ တကယ်မှန်ခဲ့ရင်တော့ Mi ဟာ ခါတိုင်းနှစ်တွေထက်ပိုပြီး Smartphone လောကကို လှုပ်ခတ်ဆူညံစေဖို့ကတော့ သေချာသလောက်ရှိနေပါတယ်။
Source: Tech Droider
တရားဝင်ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ OPPO Reno35G Series
နောက်နှစ်မှာထွက်ရှိလာမယ့် iPad Pro မှာ Triple Cameras ပါဝင်လာနိုင်